Iindawo zokuhlala eKrisimesi emangalisayo ngo-2022 | Ukuhamba kwe-Absolut
UAlberto Legs | | IAmsterdam, IItary Islands, ECaribbean, EU.SA, España, Philippines, Holland, Madrid, Morocco, Mekhsikho, ENew York, Prague
Xa kusondela ubusika, ingqele ifika, ama-chestnut ajiweyo kwaye ewe, kunye neKrisimesi. Elona theko lidumileyo kwihlabathi liphela alisiba ngumhla olungileyo wokuba nosapho kuphela kodwa nokujonga uhambo ukuba ufuna ukubaleka izidlo zobunzima obuqhelekileyo kwaye wonwabele amaxabiso okhuphiswano kwezinye iindawo. Kulo nyaka, wanga uSanta Claus angakhangela kwezi zilandelayo Iindawo apho uhlala khona iKrisimesi emangalisayo.
2 ENew York
3 Irovaniemi (eFinland)
Ummelwane wase-Yurophu onqabileyo ubelokhu ezidibanisa iminyaka njengenye yeendawo ezinomdla kakhulu apho ukonwabela iKrisimesi emangalisayo. Izaliswe yimizi yasebukhosini ekhathazwe ziindawo ezinabantu abaninzi, iindlela zobuhlanga ezinqumla iAtlas kunye neenkampu eziyindumasi entlango yaseSahara, iMorocco igcwele isimanga kwabo bafuna ixesha lekrisimesi elahlukileyo. Ibekwe ngu IMarrakech, iigadi zayo kunye neesokisi, Ukuqhagamshela kwiidolophu eziselunxwemeni ezinje nge-Essaouira kwaye ufikelele entlango okanye, kulungile emantla eli lizwe ngentsomi uFez kunye neMeknes ukusondela eChaen, yidolophu enomdla epeyintwe luhlaza okwesibhakabhaka kwaye ivaleleke phakathi kweentaba.
Ngubani ongazange aphuphe nge IKrisimesi eNew York? Ngaba unako ukutyibilika ngomkhenkce kwiziko iRockefeller Centre kwaye ecaleni komthi wayo omkhulu ukugqiba eColumbus Circle, eCentral Park, ukulahleka kwintengiso yeKrisimesi ebandakanya ukuya kuthi ga kwizitendi ezahlukeneyo ze-100, kuvakala kulungile, akunjalo? Ukuba akunjalo, ungasoloko ulinde uEva woNyaka oMtsha ofikelela encotsheni yakhe apha ngenxa yoNyaka oMtsha ka-Eva obhiyozelwe kwi-Times Square elandelwa ngumdlalo wezibane ezothusa ezivela kwiindawo ezintlanu zesixeko.
Bathi uSanta Claus ulinda unyaka wonke kumzi-mveliso olahlekileyo apho asebenza kunye neengalo zakhe esenza zonke izipho eziza kutyhutyha ngeetshimini ngobusuku obandulela iKrisimesi. Iindaba ezimnandi zezokuba le ndawo ikho kwaye ikwindawo ekufutshane ne Rovaniemi, isixeko saseFinnish Lapland esilikhaya kwilali edumileyo yaseSanta Claus, indawo enclave apho unokufumana umzi-mveliso kunye nendlu yendoda etyebileyo edumileyo emhlabeni elandelwa kukuhlala kwiiigloo, ukukhwela imikhono okanye, ngakumbi, ukubonwa kweminye yemiboniso yendalo enomtsalane emhlabeni: Izibane zaseMantla!
Ngaba ujonge iKrisimesi emangalisayo kwindawo eyahlukileyo ngokupheleleyo? Ke akuyomfuneko ukuba uye kwelinye icala lehlabathi ubakhangele: iiCanary Islands yiparadesi kwiiyure nje ezimbini ukusuka kwinqwelomoya, zilungele iholide engafakwanga. Kwaye nangona zonke iziqithi zayo zicetyiswa, sikhetha iFuerteventura, "ulwandle lweCanary Islands", ekumemela ukuba ungene kwidiphu ebusika kwiAtlantic ngaphambili ilahleke kwiindawo zayo zokulala, iidolophu ze-surf ezifana neCorralejo okanye iilwandle ezinjengeCofete, evusa iparadesi engapheliyo.
Kuyo yonke imibhiyozo yeKrisimesi emhlabeni, iiPhilippines 'zezona zinde kuzo zonke. Ukususela ekuqaleni kukaSeptemba ukuya kuJanuwari 6, i-archipelago yaseAsia igcwele imibhiyozo kunye nemingcelele edibanisa intsomi yesizwe ngefuthe leSpanish, ivuselela ngokupheleleyo izitrato kunye needolophu zayo. Isizathu esifanelekileyo soku hamba uye kwindawo yetropiki apho ubushushu, iilwandle ezinjenge-El Nido okanye iziqithi ezinomdla njenge-Bohol exuberant yenza iparadesi yeemvakalelo apho amaxabiso (kubandakanywa nalawo okuhamba ngenqwelomoya) abiza kakhulu kwezi nyanga.
Ikomkhulu leRiphabhlikhi yaseCzech liyaqhubeka ukuba yindawo eyodwa yokujolisa kuyo yonke amehlo njengoko ixesha leKrisimesi lisondela. Idume kakhulu Iimarike zeKrisimesi ezenzeka kwiSixeko esiDala (kubandakanya indawo yoKuzalwa enkulu), udlula kwiikonsathi zomculo zeklasikhi zePrague Opera okanye izitrato zayo ezihonjisiweyo ukuhamba newayini enezandi esandleni, iPrague sisixeko esifanelekileyo kolo hambo lweKrisimesi apho uhlala usenza khona. Into emangazayo ngayo.
Isigebenga saseMexico silidlelane elikhethekileyo kuzo zonke iintlobo zezicwangciso zeKrisimesi. Ukuba ufuna ukusebenzisa amaxabiso ancitshisiweyo eeholide zayo kunye namava kwiRiviera Maya, akukho nto ilunge ngaphezu kokuthatha uhambo ngenqwelomoya nokwamkela unyaka omtsha phakathi kwelanga, iilwandle, iicenotes kunye namanxuwa kaMayan. Ngaphandle koko, ungasoloko ukhetha utyelelo olukhethekileyo ngakumbi olufana nesixeko sase San Miguel de Allende, apho amakhandlela, iipinata kunye neiglasi zepunch zifudumeza iKrisimesi eyahlukileyo ephawulwe yintsomi ebalasele kwilizwe laseMariachis.
Ubunzulu besi sidlo sentsapho? Iiyure kunye neeyure usenza inkukhu ebhakiweyo kunye nesidlo sangokuhlwa? Ukuba ujonge ukubaleka iKrisimesi minyaka le, iAmsterdam yeyona ndlela ilungileyo. Engaqhelekanga kwaye yahlukile, isixeko saseDatshi siphakathi imijelo yayo, iivenkile zekofu kunye nezinto ezinomtsalane kwinkcubeko esona sizathu sokumangaliswa kweKrisimesi yokumangalela ukuhambelana neemarike zekrisimesi, iikhonsathi zomculo weklasikhi kodwa, ngakumbi, loo mboniso ubiziweyo Umnyhadala wezibane ezikhukulisa umbindi wedolophu ngezibane ze-LED ukusuka ngasekupheleni kukaNovemba ukuya ekuqaleni kukaJanuwari. Iphini yokhuseleko.
Isixeko saseAustria sesinye sezo zixeko zaseYurophu zilungele ukulahleka ngeentsuku zikaDisemba ngenxa yoluhlu olubanzi lwezinto onokukhetha kuzo: ungandwendwela iimarike zekrisimesi kwaye wonwabele ikonsathi yomculo weklasikhi kwisixeko awazalelwa kuso uMozart, phakathi kwabanye zinokwenzeka. Kwangokunjalo, ukuba uhamba ngeempelaveki ngaphambi kweKrisimesi, unokumangaliswa ngu Umnyhadala weKrampus Runs, Umnyhadala obonisa idemon yendawo usebenze njengendawo yokuzifihla kwabanye babahlali abenza indlela yabo ngokubetha.
Ifoto kaMirador Madrid
Ikomkhulu laseSpain lihlala lilukhetho olufanelekileyo xa kufikwa kumava eKrisimesi egcwele isimanga: uhambahamba kwiimarike ezininzi, ucamngce ngokuhonjiswa, ube netheko leKrisimesi kwimivalo ehamba phambili okanye, kungcono, ulinde uDisemba 31 kulowo i IPuerta del Sol iba yeyona ndawo ibalaseleyo eSpain. Kungenxa yokuba ewe, uyazi ukuba uhlala ufuna ukuchitha ukuphela konyaka usitya iidiliya entliziyweni yelizwe.
Kukuphi kwezi kwiindawo oya kuhlala kuzo iKrisimesi Iyothusa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iindawo zokuhlala apho uhlala khona iKrisimesi emangalisayo